Indlela yokupheka i-asparagus: tyhila iimfihlo zeesitya ezimnandi
Isihloko senkosikazi yemifuno eselunxwemeni ngakwesokudla sinokutshatyalaliswa kwempahla okanye njengokwesiko ukubiza abantu - isisindo se-asparagus. Kodwa yintoni na enye, kuba inomdla ocebileyo, ixabiso eliphezulu lokutya kunye nokubonelela okubonakalayo kwezinto ezincedo. Nangona kunjalo, abaninzi abafazi abakhupheliyo ukukhawuleza ukuvalela ukudala izinto zokutya ngokungazi, indlela yokulungisa kakuhle imifuno. Makhe siqwalasele ngokubanzi iinkcukacha zokusebenzisa i-asparagus.
Ukupheka okukrakra kwemifuno
Ngoko, ukuchaneka kokulungiswa kwemifuno kusekelwe ekucoceni okufanelekileyo nokupheka kwamahlumela. Ngaphambi kokupheka i-asparagus, kufuneka ihlambuluke ngokupheleleyo, kwaye le nqubo incike kulowo ukhetha ibakala elimhlophe okanye eliluhlaza. Kuqhelekileyo ukuhlambulula iintlobo ezimhlophe kuphela phantsi kweengcebiso eziphezulu, kunye nokuluhlaza-ukususela phakathi kwintonga.
Kuvumelekile ukuba kucocwe i-asparagus cascade kunye nomtya oqhelekileyo okanye isixhobo sokucoca imifuno. Ukuba usebenzisa indlela yokuqala, unako ukususa iingqimba ezinobungozi ngaphandle kokulimaza inxalenye yentsimbi. Ngelo xesha, kuyimfuneko ukuba usebenze ngokucophelela, ukuze ungaphumeleli ukuphunyuka kwizandla.
Ukupheka kwe-Asparagus yinkqubo enobunzima neyinkathazo. Ukuze ulungise i-asparagus eluhlaza, kukho iindlela ezininzi: ngokubambisana kunye nokukhululeka. Ukusebenzisa indlela yokuqala, kuyimfuneko ukulungiselela ipani elincinci elincinci kwaye unciphise iziqu apho, ziboshwe ngentambo. Gcina ukhumbule ukuba iziqwenga ziyafikelela ekulungiseni ngokukhawuleza kuneziqu. Ngenxa yalesi sizathu, iqela le-asparagus lidibene emanzini ukwenzela ukuba iziqwenga zingaphezulu kwamanzi. Ngaloo ndlela, kuvela ukupheka okungahambi kakuhle - iziqu zilungiselelwe ngamanzi abilisiwe, kunye neengcebiso-phantsi kwefuthe le-steam.
Kungakhathaliseki ukuba yindlela yokupheka, enye imeko ebalulekileyo ihlala - amanzi anamanzi abilisiwe. Nangona ulungiselela i-asparagus efriji, engeza 2 tsp. ityuwa kwaye izise umbane kwindawo yokubilisa. Emva koko faka imifino kwisitya. Ungongeza 1 tsp. ubusi okanye iqhekeza lemon, ukwenzela ukuba ingcamango yemifuno iza kuzaliswa.
Qaphela ukuba i-asparagus eninzi eluhlaza ingapheka kwi-sieve ekhethekileyo. Ukwenza oku, umthwalo we-asparagus ufakwa phantsi kwe-sieve, emva koko ubhaptizwe emkhunjini ngamanzi abilayo. Ubungakanani bokupheka buhluka ukusuka kubukhulu beentlobo kunye nohlobo lwemifuno. Ukuba upheka iindidi ezimhlophe, kuya kuthatha imizuzu eyi-8-10, ukuba luhlaza-3-4 imizuzu.
Ukongeza, ngaphambi kokupheka imifuno, kufuneka ulungiselele iqhwa. Isetyenziselwa ukuphelisa ngokukhawuleza inkqubo yokuthambisa, eyokuhlala eminye imizuzu embalwa kwiimpawu emva kokuba isuswe kwi-pan. Emva kokuwafaka kwiqhwa, iziqu ziyaba zikhuni kwaye zifumane umbala ocebileyo.
Imifuno ephekiweyo ikhutshwe kwiqhwa, ivumelekile ukuba ichithe amanzi amaninzi kwaye imiswe kwi-napkin yephepha. Emva koko unokusasaza kwi-plate kwaye usebenze nge-sauce.
Utshintsho lweesucu ze-asparagus
Njengomthetho, i-asparagus ihanjiswa phantsi kwe-spicy sauce, equka izikhuni zeqanda, ijisi lemon kunye nebhotela. Nangona kunjalo, gxininisa ukunambitheka komdaka kwintlobo yemifuno ingaba yinani labanye. Kungakhathaliseki ukuba ulungiselele isidlo sokudala okanye i-asparagus e-Korean, ungasebenzisa isiseko sosizi:
isardadi kunye ne-mayonnaise yemvelo kunye nejisi lemon;
Ghee ngeqanda leqanda kunye neparsley;
ukhilimu omuncu ngamacube aqoshiwe kunye negalikhi;
ioli yendalo yemifuno kunye neengqungquthela zomsedare okanye umsedare;
ushizi othobileyo lweCamembert;
ioli kunye nomhlaba weParmesan ushizi;
ukwenzela ukulungiselela i-soya asparagus i-sauce ye-Pesto.
Ngokuqinisekileyo, ukupheka akuyona indlela yodwa yokulungisa i-asparagus. Unokupheka imifuno, i-pickle, engeza kwi-pasta, isobho, usetyenzise njengokuba ugcwalisa ukubhaka okanye i-casserole. Nangona kunjalo, ukunambitheka okwenyaniso kwe-asparagus kunokuvakalelwa xa kupheka amaqabunga, ujongela iphunga elimnandi kunye nokuthabatha okumnandi.
Iimbono ezimbalwa zekusasa sakusasa
I-recipe yokuvavanywa kwepayi
Ukupheka ilayisi elimnandi
Izitya ezithakazelisayo ezenziwe kwiitamatati
Iresiphi yokuzonwabisa: iigebengu ezigqibeleleyo zegingerbread
Iimfutshane ezimfutshane malunga nentwasahlobo yokubamba ngekhanda - kubafundi besikolo sokufunda, abantwana aba-6-7 kunye no-8-9 iminyaka - yesikolo, i-kindergarten - Izibongo ezintle malunga nentwasahlobo evela kwiibongozi zaseRashiya - iPushkin, uAnni Barto
Ilayisi kunye neetamatati kunye neselmatory
Uthando lokuqala alukhohliwe
Indlela yokunciphisa umzimba ngaphandle kokutya okudliwayo
Isitya seesidlo ngesifo sesisu
Iintambo zePowlar Polar
Ukuba utshatile uze udibana nomthandana wangaphambili
Indlela yokwenza i-emo makeup?
Indlela yokuphuma kwindlala
Indlela yokuzolalisa umntwana okhalayo: amabinzana amane asebenzayo
IHoroscope ye-Scorpio-Abafazi ngo-Matshi 2017
I-Brunette ngamaso aluhlaza
Idizayini yeeplani: isitayela saseShayina
I-Anesthetics ngexesha lokukhulelwa